superposition: Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Martsa 2019	• 1 Comment
Ny Microsoft Hololens 2 dia fandrosoana mahatalanjona mahatalanjona eo amin'ny sehatry ny Repercussions Augmented. Ny tena zava-misy dia dingana nomerika momba ny tontolo tena izy. Izany no antony mahatonga ny solomason'i Microsoft ho vita amin'ny mangarahara, raha oharina amin'ireo solomaso virtoaly fantatsika momba ny lalao. Ny tena zava-misy dia manana ny ho avy ary mahafantatra [...]
Tsotra tsotra izao ny maminavina ny ho avy raha hitanao amin'ny alalan'ny script: lasa Nostradamus
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Janoary 2019	• 6 Comments
Na dia efa naminavina ny ho avy aza dia toa zavatra ho an'ireo olona tahaka an'i Nostradamus miaraka amin'ny fahalalàna fahalalana momba ny astrolojia, saika ny olon-drehetra dia afaka maminavina ny ho avy raha vao mahita ny "lalao". Eo am-piandohana, sarotra ny manasitrana ny fahamarinan'ny famonoana, satria izy [...]
Ahoana no ahafahantsika manakana ny fizotry ny faminaniana amin'ny andro farany?
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 5 Janoary 2019	• 9 Comments
Ny fanontaniana avy amin'ny lohateny dia ho mahagaga ho an'ny olona maro ihany. Mety ho mampalahelo ianao ka hahita ny fe-potoana farany amin'ny famaritana ny teny tsy misy dikany. Tsy hitanao ve hoe firy ny olona marary saina mbola manana rafi-pinoana ihany? Ny finoana ny evolisiona, ohatra. Eny, io ihany koa ny rafi-pinoana, satria [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Oktobra 2018	• 17 Comments
'Ny tanjon'ny NASA amin'ny fanitarana ny universe' dia lohateny hafahafa, sa tsy izany? Misy izao tontolo izao fotsiny ary ny NASA dia mijery azy fotsiny. Manao izany amin'ny teleskaopy toy ny Hubble izy. Ny NASA dia tsy afaka manitatra an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia zava-misy ary tsy misy afa-tsy ny mamantatra izany, na dia tsy misy fetra aza izy [...]
Nahoana ny tahotra ny fahafatesana no lainga lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra?
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 15 Oktobra 2018	• 11 Comments
Matetika ianao no mandre fa ny fahafatesana dia zava-miseho. Raha ny marina dia fotoana tsy ampoizina ny fotoana. Voalaza fa maro ny olona, ​​nefa tsy misy olona afaka manao izany, ary ankoatr'izay dia miaina fotoana isika ary ny tahotra ny fahafatesana dia tena manan-danja tokoa amin'ny rafi-pinoana ataontsika. Taorian'ny famakiana [...]
Ny teoria simulation ho an'ny mpianatra avo lenta
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 1 September 2018	• 6 Comments
Mihamaro hatrany ireo mpahay siansa milaza fa ny simika dia izao tontolo izao. Ilay tarika malaza antsoina hoe Muse koa dia mifantoka mafy amin'io lohahevitra io miaraka amin'ny rakikirany farany. Ary rehefa manomboka mikarokaroka ny zava-drehetra, maro ireo mpikatsaka ny fahamarinana amin'ny fahamarinana dia manomboka ho lasa miahiahy. Ny fehin-kevitro dia ny tsy maintsy hahatsikaritra ny fifohazana [...]
Total fitsidihana: 4.153.975
RCS op Coronavirus covid-19: izay tsy maheno an'i Maurice de Hond sy Willem Engel
Benzo Wakker op Coronavirus covid-19: izay tsy maheno an'i Maurice de Hond sy Willem Engel